Numeri 10 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Ashaninka Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Singapore Sign Language Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Ntorobɛnto a wɔde dwetɛ ayɛ (1-10)
Wotu fii Sinai (11-13)
Wotui nnidiso nnidiso (14-28)
Wɔka kyerɛɛ Hobab sɛ ɔnkyerɛ Israelfo kwan (29-34)
Mpae a na Mose bɔ bere a wɔretu afi wɔn asoɛe (35, 36)
10 Na Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: 2 “Yɛ ntorobɛnto+ abien. Fa hamma* boro dwetɛ fa yɛ. Ɛno na wode bɛfrɛ asafo no abehyia anaasɛ wode bɛma wɔatu akɔ baabi foforo. 3 Sɛ wɔhyɛn abien no nyinaa a, asafo no nyinaa bɛboaboa wɔn ano aba wo nkyɛn wɔ ahyiae ntamadan no ano.+ 4 Na sɛ wɔhyɛn torobɛnto baako pɛ a, Israel mpanyimfo a wɔdeda apem apem ano no, wɔn nko ara na wɔbɛboaboa wɔn ano aba wo nkyɛn.+ 5 “Sɛ mohyɛn torobɛnto no ma ne nnyigyei kɔ soro ba fam a, ɛsɛ sɛ wɔn a wɔn asoɛe wɔ apuei fam no tu.+ 6 Sɛ mohyɛn torobɛnto no ma nnyigyei no kɔ soro ba fam ne mprenu so a, ɛsɛ sɛ wɔn a wɔn asoɛe wɔ anaafo fam no tu.+ Bere biara, sɛ wɔn mu bi rebetu a, wɔnhyɛn mma nnyigyei no nkɔ soro mmra fam. 7 “Sɛ morefrɛ asafo no abehyiam a, monhyɛn ntorobɛnto no,+ nanso ɛnsɛ sɛ moma nnyigyei no kɔ soro ba fam. 8 Aaron mma asɔfo no na wɔbɛhyɛn ntorobɛnto no.+ Ɔkwan a wɔfa so hyɛn ntorobɛnto no, ɛbɛyɛ mmara a mubedi so daa wɔ mo awo ntoatoaso nyinaa mu. 9 “Sɛ atamfo a wɔretan mo ani ba mo asaase so sɛ wɔne mo rebɛko a, monhyɛn ntorobɛnto no mfrɛ ɔman no nkɔ ɔko.+ Na Yehowa mo Nyankopɔn bɛkae mo na wagye mo afi mo atamfo nsam. 10 “Afei nso, bere a moregye mo ani,+ te sɛ bere a morehyɛ fã,+ anaa bere a morefi bosome foforo ase no, monhyɛn ntorobɛnto no ngu mo hyew afɔre+ ne mo asomdwoe afɔre+ no so. Ɛbɛma wɔakae mo wɔ mo Nyankopɔn anim. Mene Yehowa mo Nyankopɔn.”+ 11 Afei afe a ɛto so abien, bosome a ɛto so abien no da a ɛto so 20 no,+ omununkum no fii Adanse ntamadan no so.+ 12 Enti Israelfo no fii ase tu fii Sinai sare so, sɛnea wɔahyehyɛ wɔn sɛ wɔretu a wɔnyɛ no.+ Na omununkum no kogyinaa Paran sare so.+ 13 Eyi ne nea edi kan a wotui, sɛnea Yehowa nam Mose so ka kyerɛɛ wɔn no.+ 14 Enti mmusuakuw abiɛsa asafo a Yuda abusuakuw da wɔn ano a obiara wɔ n’asraafokuw no na wodii kan tui. Aminadab ba Naason+ na na ɔda n’abusuakuw asraafokuw ano. 15 Suar ba Netanel+ na na ɔda Isakar abusuakuw asraafokuw ano. 16 Helon ba Eliab+ na na ɔda Sebulon abusuakuw asraafokuw ano. 17 Bere a wotutuu ɔsom ntamadan no,+ Gersonfo+ ne Merarifo+ a wɔsoa ɔsom ntamadan no tui. 18 Na mmusuakuw abiɛsa asafo a Ruben abusuakuw da wɔn ano a obiara wɔ n’asraafokuw no tui. Sedeo ba Elisur+ na na ɔda n’abusuakuw asraafokuw ano. 19 Surisadai ba Selumiel+ na na ɔda Simeon abusuakuw asraafokuw ano. 20 Deuel ba Eliasaf+ na na ɔda Gad abusuakuw asraafokuw ano. 21 Na Kohatfo a wɔsoa tenabea kronkron hɔ nneɛma no+ tui. Ná ɛsɛ sɛ wosi ɔsom ntamadan no wie ansa na wɔadu hɔ. 22 Na mmusuakuw abiɛsa asafo a Efraim abusuakuw da wɔn ano a obiara wɔ n’asraafokuw no tui. Amihud ba Elisama+ na na ɔda n’abusuakuw asraafokuw ano. 23 Pedasur ba Gamaliel+ na na ɔda Manase abusuakuw asraafokuw ano. 24 Gideoni ba Abidan+ na na ɔda Benyamin abusuakuw asraafokuw ano. 25 Na mmusuakuw abiɛsa asafo a Dan abusuakuw da wɔn ano a obiara wɔ n’asraafokuw no tui. Wɔn na wɔbɔɔ asafo no nyinaa kyidɔm. Amisadai ba Ahiesa+ na na ɔda n’abusuakuw asraafokuw ano. 26 Okran ba Pagiel+ na na ɔda Aser abusuakuw asraafokuw ano. 27 Enan ba Ahira+ na na ɔda Naftali abusuakuw asraafokuw ano. 28 Sɛ Israelfo ne wɔn asraafokuw retu a, eyi ne nhyehyɛe a na wɔde yɛ adwuma.+ 29 Afei Mose ka kyerɛɛ Hobab a ɔyɛ Mose ase Midianni Reuel*+ ba no sɛ: “Yɛretu akɔ baabi a Yehowa kae sɛ, ‘Mede bɛma mo’ no.+ Bra ma yɛnkɔ,+ na yɛbɛyɛ wo yiye, efisɛ Yehowa de nneɛma pa ahyɛ Israel bɔ.”+ 30 Nanso ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Merenkɔ. Mɛsan akɔ me man mu ne m’abusuafo nkyɛn.” 31 Ɛnna ɔkae sɛ: “Yɛpa wo kyɛw, nnyaw yɛn hɔ, efisɛ wo na wunim baabi a ɛsɛ sɛ yɛkyekye asoɛe wɔ sare yi so. Wubetumi akyerɛ yɛn kwan.* 32 Sɛ wo ne yɛn kɔ a,+ papa a Yehowa bɛyɛ yɛn biara no, sɛnea ɛte biara yɛn nso yɛbɛyɛ wo bi.” 33 Enti wofii ase nantew fii Yehowa bepɔw no+ ho twaa nnansa kwan, na Yehowa apam adaka no+ dii wɔn anim wɔ nnansa akwantu no mu hwehwɛɛ baabi a wɔbɛsoɛ.+ 34 Sɛ wotu fi baabi a wɔakɔsoɛ no a, na Yehowa mununkum+ kata wɔn so awia. 35 Bere biara a wɔde Adaka no besim akɔ no, Mose ka sɛ: “O Yehowa, sɔre,+ na ma w’atamfo mmɔ nhwete, na ma wɔn a wokyi wo no nguan mfi w’anim.” 36 Na sɛ wɔsoɛ a, ɔka sɛ: “O Yehowa, san bra Israelfo mpempem bebree+ no nkyɛn.”
^ Kyerɛ sɛ, Yetro.
^ Anaa “wubetumi ayɛ yɛn aniwa.”